Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Inaad Fiirsato Taytal Aadan Lahayn Ma Waxaad Ku Difaaci Kartaa Dhagar Qabe Umada Dambi Ka Galay Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Sida aan Horay u baahinay waxa jira Calooshooda u shaqaysatayaal sheeganaya in ay kasoo jeedaan Shabeelada Hoose isla markaana fiirsanaya danahooda khaaska ah oo loo adeegsado inay ka dhax shaqeeyaan hagar daamada Biimaal ayaa hada waxa soo baxaya kuwo aanan qarsan Karin howsha ay ku jiraan.
Hadaba akhriste yaad ku ogtahay in Magaalada Marka uu ka yahay Madaxa Faydhowrka.
Waxa uu ahaa Mukhallas ku sugnaa Yaman dadka Soomaalida ahna ka gudbin jiray xuduuda ay wadaagaan Yaman iyo Sacuudiga, waxa lagu sheegi jiray in uu yahay qof Qatar badan aana ka shakin in qof Safar ah la jalaafeeyo ama meel cida ah looga tago.
Ku dhawaad 7 Sano ayuu Ka maqnaa Magaaalada Marka Cid kasta oo ka Gudbeysa Xadka Yaman iyo Sacuudiga ciday doontaba ha ahaatee way taqaan, waxana meesha loogu yeeri jiray jiray Magaca Magafe oo ahaa Nin waxa uu doono oo shirqool ah in marnaba aanu Gefi jirin.
Waxa uu joogaba Yaman waxa mar un laga war helay inuu ku sugan yahay Muqdisho ka dib markay Dooni kasoo qaaday Cadan oo ay kusoo dejisay Magaalada Boosaaso.
Waxaa la sheegaa inuu baxsad ahaa oo si dhuumaalaysi ah kaga soo baxsaday Dalkaas uuna soo raacay Doon kalumaysi ahayd.
Markii uu soo gaaray Muqdisho dadka waxay ka war heleen inuu Marka kusoo wajahan yahay Nin wata Taytalka Xoghayaha Dowlada Hoose ee Magaalada Marka.
Waxa uu yimid Marka Durbaba waxa uu guda galay sida uu dadka ku qaldi karo, waxa la arkay isagoo Xambaarsan ComPutar labtob ah oo ku dhex jiray Boorso, meelo badan ayuu la tagay warqado Been abuur ah oo markaas uu ku sheeganayey XoghayahaDowlada Hoose ee Marka.
Waa Calooshiisa u Shaqayste Cabdi Xakiin Cabdi Siidow Muuse oo in mud ah la wareegayey warqadaas Been abuurka ah ayaa ugu dambeyn loo sheegay in ay jirto jago madax banaan oo uu ku heli karo wax badan oo uu dar daro isa markaana uu dib usoo ceiyo hagar daamadii uu ku haayey Yaman.
Waa Madaxa Faydhowraka ee Degmada Marka, waxa uu kulmiyey Ganacsatada Daawada ku iiibisa Marka waxa uu ku amray inay bixiyaan lacago uu ku sheegay is diiwaan gelin iyo baaris lagu samaynayo Daawada taala Farmashiye yaasha ay iibiyaan, waa lala yaabana waxa Daawada laga baarayo iyo Cudurka lagu sheegay.
Ganacsatada ayaa amarkaas u arkayey mid ka yimid maamulka Degamada Marka iyagoo qaadnaya awaamiirta una hogaansamaya amarka lasoo jeediyey ayaa Cabdi Xakiin waxa uu soo daabacay Warqado Been abuur ah oo lagu soo daabacay Xarunti Hore ee Hay’ada Swisso Kalmo oo hada xarun Ciidan u ah Maleeshiayada Cabdi Cabdulle.
Waraqqahaas ayaa la siinayey qof kasta oo Bixiya lacagta, Cabdi Xakiin Cabdi Siidow ayaa u arkay inuu umada ku dhici karo, waxaa arinkaasi ku baraarugay Odayaal dhaqameed magaalada kasoo jeeda waxayna ku qabteen isagoo ku guda jira dhibaataynta Ganacsatada Degmada Marka.
Mudo laba jeer ah ayaa xabsiga loo taxaabay isagoona markii hore si damiin ah loo daayey ayaa hadana waxa loo xiray Ganacsato ku sheegatay lacago Dayn ah oo uu ka qaatay isla markaana uu ku in kiray markii laga soo qaxayey Marka, Cabdi xakiin waxa uu ku jiray Xabsiga dhexe ee Marka isagoona markii dambe ay sii daayeen Ciidamada Booliiska ee Marka ku sugan.
Cabdi Xakiin Cabdi Siidow Dhawaan waxa uu ka hadalay mid ka mid ah idaacadaha ka howlgala Muqdisho isagao sheeganaya jagada uu ku baadi jiray dadka marka ku sugan. Waxa uu idaacada ka sheegay inuu ka xunyahay in runta laga sheego ama lasoo bandhigo dhibaatada Cabi Cabdullule xirsi uu ku haayo reer Shabeelada Hoose.
Cabdi cabdulle oo aan ognahay waxa uu ka gaystay Shabeelada hoose isla markaana aan soo bandhignay hagar daamadiisa ayuu ku tilmaamay Aqoon yahan laga Been abuuratay.
Soomaalida ayaa ku maahmaahda Nin dhumaya Dhug malahan Cabdi Xakiin ayaa iska indha tiray in Cabdi Cabdulle ay ku maqan yihiin shilqool uu ka gaystay Marka Muwaadiniin u dhashay Beesha Biimaal oo ilaa hada lagu ogayn Geeri iyo nolol midna. Maalmo ayuu ku howlanaa inuu kulmiyo dhalanyarao kasoo jeeda Biimaal si uu ugu qaado Sawiro uu ku sheegi rabay in laga soo hor jeedo xaqiiqda Cabdi Cabdulle hase ahaatee kulankaas uu diyaarinayey ayaa fashilmay ka dib markii dhalainta ay ka war heshay dhagartiisa markaas ayuu afka furty.
Calooshiisa u shaqaystahan ka sokow waxa jira calooshooda u shaqaystayaal badan oo jogooyin been abuur ku tagay Marka isla markaana ay waraaqadihii umada ku shirqooli lahaayeen ay soo siiyeen dhagar qabayaal doonaya inay dad ku dhax yeeshaan jaajuus iyaga u adeega.
Hadaba ka garo magaca uu sheegatay Calooshiisa u shaqayste Cabi Xakiin Madaxa Faydhowrka Degmada Marka iyo Cida uu ku difaacayo Jagadaas Been abuurka ah ee loo sameeyey.
Waxan soo gudbin doonaa dhagar qabyaasha uamada ka qarsooneen iyo jagooyinkooda Been abuurka ah ee ay ugu adeegaan Mooryaanta umada dhibaataynaya.
W/Q CabduLahi Mursal Cali